CoinMarketCap သည် SHIB စာချုပ် လိပ်စာအတု ၃ ခုကို စာရင်းပြုစုထားကြောင်း၊ Twitter မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား - Token Myanmar
CoinMarketCap သည် SHIB စာချုပ် လိပ်စာအတု ၃ ခုကို စာရင်းပြုစုထားကြောင်း၊ Twitter မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
ရေပန်းစားသော meme တိုကင် Shiba Inu (နောက်ကွယ်ရှိ ဆော့ဖ်ဝဲများ) သည် သောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြာသပတေးနေ့တွင် တွစ်တာဒရာမာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။SHIBCoinMarketCap သည် Binance Smart Chain နှင့် သက်ဆိုင်သည့် SHIB စာချုပ် လိပ်စာအတု (၃) ခုကို စာရင်းပြုစုထားသည်ဟု ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် (BNB) ဆိုလာနာ (တို့သို့) နှင့် Terra Luna (LUNA) blockchains Shiba Inu မှ ဝန်ထမ်းများသည် လိပ်စာများသည် မလုံခြုံကြောင်း အခိုင်အမာ ဆိုကာ CoinMarketCap သည် စွပ်စွဲထားသော အမှားကို ပြင်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေတဲ့ အချိန်မှာ စာချုပ် လိပ်စာတွေက ရှိနေဆဲပါ။ ကြည့်ရှုနိုင်သော CoinMarketCap တွင်
မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်၊ @CoinMarketCap . pic.twitter.com/DXP2wZRhYC
— Shib (@Shibtoken) ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၂
နေ့အစောပိုင်းတွင်၊ CoinMarketCap သည် စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော စာချုပ်လိပ်စာများသည် ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေပေးငွေယူများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော wormhole လိပ်စာများဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အရ၊ နာမည်ကြီး crypto စျေးနှုန်းခြေရာခံသည့်ဆိုက်သို့ Shiba Inu မှဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့အား ဆက်သွယ်ရန် တရားဝင်ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် မသွားဘဲ ပိုမိုရှင်းလင်းမှုအတွက် လှမ်းဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာရှိ ETH မဟုတ်သော စာချုပ်လိပ်စာများကို သတိပြုပါ။ @shibtoken ဤပိုင်ဆိုင်မှု၏ ထုပ်ပိုးထားသောဗားရှင်းများ၏ ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်လွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် wormhole လိပ်စာများhttps://t.co/IhbNBJkwnf
— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၂
Shiba Inu အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပရောဂျက်ခေါင်းဆောင် Shytoshi Kusama က အဆိုပါကိစ္စကို မှတ်ချက်မပေးသော်လည်း developer ၊ ပြန်တင်ထားသည်။ တွစ်တာအသုံးပြုသူ @wenfloat မှရေးသားခဲ့သည်၊
"သင်လိမ်လည်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာတွင်မှားယွင်းသောစာချုပ်များထည့်ခွင့်ပြုမည်ဆိုပါက (ကျွန်ုပ်တို့သည် ERC-20 သာဖြစ်သည်)၊ သင်သည် SHIB ကိုပယ်ဖျက်သင့်သည်။ အနည်းဆုံး သင်သည်လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့်ပူးပေါင်းမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလပေါင်းများစွာလျစ်လျူရှုထားပြီး၊ သင်ဘယ်မှာလဲ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်?"
Shiba Inu သည် လွန်ခဲ့သည့် 12 လအတွင်း ၎င်း၏ ကြယ်ပွင့်အမှတ်အသား အမြတ်အစွန်းများအပြင် ၎င်း၏ (တခါတရံ အလွန်အကျွံ) စိတ်အားထက်သန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြောင့် လူသိများသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် SHIB သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အမေးအဖြေပလက်ဖောင်းဟောင်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာအား မေးမြန်းပါ။ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Shytoshi Kusama ကို အသရေဖျက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ တရားရုံးတွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အထောက်အထားကို ထုတ်ပြမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်၊ ဆိုက်သည် နာရီပိုင်းအတွင်း follower 58,000 မှ 10,000 ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ၎င်း၏တွစ်တာပို့စ်များကို လှောင်ပြောင်ရယ်မောကာ ရာနှင့်ချီသော ကြယ်တစ်ပွင့်စာများနှင့်အတူ မြှုပ်နှံထားသည်။ သုံးသပ်ချက် TrustPilot (အများစုကိုဖယ်ရှားပြီးကတည်းက) ပေါ်တွင်။
Cathie Wood ၏ ARK ETF သည် Circle နှင့် ပေါင်းစည်းထားသော SPAC ၏ ရှယ်ယာ 6.93 သန်းကို ၀ယ်ယူခဲ့သည်
Disney၊ Second Life နှင့် K-pop